Dad badan oo lagu dilay weerar lagu qaaday xaflada caleemo-saarka ugaas cusub - Caasimada Online
Home Warar Dad badan oo lagu dilay weerar lagu qaaday xaflada caleemo-saarka ugaas cusub
Dad badan oo lagu dilay weerar lagu qaaday xaflada caleemo-saarka ugaas cusub
Bambaas (Caasimada Online) – Toddoba qof ayaa ku geeriyooday, tiro kalena waa ay ku dhaawaceen dagaal dhex maray ciidamada dowlad Deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee Liyuu Boolis iyo dadka deegaanka Bambaas ee degmada Gursum, gobolka Faafan.
Falkaani geerida sababay ayaa ka dhashay marrkii ay ciidamada Liyuu Boolis soo gaareen magaalada Bambaas, halkaasi oo ka socotay xaflad lagu caleema saarayay Ugaas cusub oo beelaha deegaanka yeelanayaan, waxaana halkaasi ka dhashay iska hor-imaad dhex maray dadka deegaanka iyo Liyuu Boolis.
Ciidanka Liyuu Boolis ayaa isku dayay inay joojiyaan xafladda caleema saarka Ugaaska cusub, waxaana ka horyimid dadka deegaanka oo iska difaacay, waxaana sidaas ku qarxay dagaalka laba dhinac.
Weli ma cadda sababta ay ciidamada Liyuu Boolis u doonayeen inay joojiyaan xaafladda caleemo-saarka.
Falkaani ay ku kaceen ciidamada Liyuu Boolis ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaan weli wax war ah kasoo saarin Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ciidamada Liyuu Boolis ayaa lagu eedeeyaa inay geystaan falal ka baxsan bini’aadanimada, iyadoo dowladda ay horay ugu dhawaaqday inay baabi’ineyso ciidanka Liyuu Boolis oo loo arko kuwo sumcad xumo ku ah maamulka iyo Itoobiya.